स्यामसंग ग्यालेक्सी ए को युरोपमा पागल मूल्य छ के हुँदैछ पत्ता लगाउनुहोस्! | Androidsis
सामसु and र यसको रणनीतिमा परिवर्तन यसको केही मध्य-दायरा उत्पादनहरूमा चासोको कमीको कारणले, अन्य एशियाई उत्पादनहरूको दबाबको कारण र आंशिक रूपमा केही उत्कृष्ट विक्रेताहरूले प्राप्त गरेको डरपोक परिणामका कारण पनि, हामी पहिले नै बोलेका छौं। हाम्रो ब्लगमा अन्य केसहरू। यद्यपि युरोपमा यसको भर्खरको टर्मिनलहरू सुरू नगर्ने निर्णयले पुन: बिक्रि गर्ने व्यवसायलाई निम्त्याउँछ जहाँ मूल्य वास्तवमै पागल हुन्छ। सामसुले बजार गुमाउँदा त्यस बिक्रीका फाइदाहरू गुमाउँछन्। र त्यहाँ अरूहरू छन् जसले प्रशंसकहरूको फाइदा लिन्छन् जो एक निश्चित मोडेलको साथ मोहित भएका छन्। को अन्तिम कारणले विवाद उत्पन्न गरेको छ ग्यालक्सी A8 हो.
El सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A8 मूल्य युरोपमा यो आधिकारिक रूपमा अवस्थित छैन। यद्यपि एशियाबाट आयात गर्ने केहि वेबसाइटहरूमा, यसलाई अत्यधिक लागतमा फेला पार्नु सामान्य हो जुन केवल पहिलो दृष्टिमा प्रश्नको रूपमा मोडलको प्रेममा परेकाहरूको लागि स्वीकार्य हुन्छ। उदाहरण को लागी, वर्तमान कोरियाली मोबाइल फोन को औसत बिक्री मूल्य 500 र 520 यूरो को दायरा भन्दा कम छैन। के यो तपाईलाई अविश्वसनीय लाग्छ? वास्तवमा यो छ। यसको लागत ग्यालक्सी एस of को तुलनामा छ जुन हामीलाई याद छ कम्पनीको फ्ल्यागशिप हो।
1 सामसु किन बजारलाई वेवास्ता गर्दैछ?
1.1 के ग्यालक्सी A8 यस मूल्यमा बेचि छ?
सामसु किन बजारलाई वेवास्ता गर्दैछ?
कोरियाली कम्पनी हो हाल धेरै विशेष बजारमा अनुकूलनको प्रक्रियाको सामना गर्दै। एक तर्फ, यो बजारमा रहनको बारेमा चिन्तित छ जसमा यो एक नेता हो, तर यसले यसको उत्पादन प्रस्ताव समायोजन गरेर अरूले राम्रो गर्नको लागि सुरू गर्न सक्दछ। विशेष गरी गुणस्तरीय एशियाई निर्माताको आगमन र एप्पलसँगको उनको अनन्त प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा यसले उनलाई मूल्य चुकाइरहेको छ, जसले उनलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै युद्धहरू गुमायो।
अर्कोतिर, भित्र सामसुले अधिक टर्मिनलको नियम शासन गर्‍यो, उत्तम। उनीहरूले पत्ता लगाए कि यो पूर्ण विफलता हो र उनीहरूलाई सबै कुरा पुन: केन्द्रित गर्न समय चाहिन्छ। तिनीहरू युरोपलाई वेवास्ता गर्दै छैनन्, तिनीहरू एकैचोटि धेरै मोर्चाको सामना गर्न सक्दैनन्। हुनसक्छ कुनै विन्दुमा, ग्यालक्सीको ए-रेंजले योजना गरे अनुसार कार्य गर्दछ, रणनीति परिवर्तन हुन्छ र चीजहरू सामान्यमा फर्किन्छन्। तर इमान्दारीपूर्वक, मलाई लाग्दैन कि यो छोटो अवधिमा हुनेछ।
के ग्यालक्सी A8 यस मूल्यमा बेचि छ?
हामी एक आर्थिक पूंजीवाद मा बाँचिरहेका छौं जसमा आपूर्ति र माग भनेको कानून हो जुन बजारलाई सार्नेछ। यसको मतलब यो हो कि यदि प्रस्ताव शून्य छ भने, युरोपमा ग्यालक्सी ए as को मामला मा, जतिसुकै सानो माग भए पनि, यो एक प्रीमियम तिर्न तयार हुनेछ। विक्रेताहरू जसले सामान्यतया एशियाबाट यस टर्मिनललाई आयात गर्दछन्, र अरूहरू जसले युरोपियन बजारमा देखा पर्दैनन् उस्तै लाइनमा छन्। र तिनीहरूले यसको फाइदा लिन्छन्। यदि तपाईंले 8२० यूरो भुक्तान गर्नुभएन भने तपाईं हाल ग्यालेक्सी A8 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो हो, तपाईंले यसलाई त्याग्नु पर्छ।
यद्यपि यो एक दुष्कर्म सर्कल हो, किनकि जबसम्म त्यहाँ माग छ प्रस्ताव यी बेतुका मूल्यहरूको साथ जारी रहनेछ, सामसु the मात्र यो रणनीतिलाई अन्त्य गर्न सक्ने एक मात्र हुनेछ। र अहिलेको लागि, कम्तिमा पछिल्ला जानकारीका बारे ज्ञात छ जुन कम्पनीको बारेमा थाहा छ र यसको बजारमा सुरू गरिएका उत्पादनहरूको पुनर्संरचनाको लागि, यस्तो लाग्दैन कि उनीहरू त्यसो गरिरहेका छन्। त्यसो भए, यदि तपाइँ यी उत्पादनहरू चाहानुहुन्छ भने तपाइँ प्रीमियम भुक्तान जारी राख्नुपर्नेछ। मेरो केसमा, म यो प्रतियोगिता बाट अधिक किफायती विकल्प छनौट गर्न सिफारिस गर्दछु। तर, यदि तपाइँ सामसु havingमा जिद्दी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले रिसेलरलाई कमिसन तिर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » युरोपमा सामसु Galaxy ग्यालक्सी ए 8 को पागल मूल्य छ के भइरहेको छ पत्ता लगाउनुहोस्!
र तपाइँ कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
Garraponi लाई जवाफ दिनुहोस्
Nexus 6P व्हाइट, कालो, रजत र गोल्ड मा उपलब्ध हुनेछ